Bollywood hotest gossip's by Appfusion Technol... 176 views
Amitabh bachchan ( kbc ) by Appfusion Technol... 168 views
Justmoviez best movies reviews bef... by Appfusion Technol... 497 views
CIO_Decisions_DecemberJan_final by Shannon Brown 106 views
Just moviez by Appfusion Technol... 528 views
Creatvity and Innovation by Nicole Stead MBPsS 188 views
1. Myanmar Good Attitude to Reform Country အမှတ်(၁) eBook 22-Apr-2014 - ဦးအဂ္ဂ(တောင်ငူ) အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းများ၊ တောင်ဥက္ကလာ - ILBC ဦးတင်မောင်ဝင်း မြန်မာ့ပညာရေး-ကမ္ဘာ့အဆင့်သို့ - USA နှင့် ကမ္ဘာ့သက္ကသိုလ်များ ပညာသင်ဆုနှင့် မြန်မာကျောင်းသားများ - ဘာသာရေး မော်လမြိုင်၊ ဝင်းစိန်တောရ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ရုပ်ပွားတော်နှင့် မြန်မာ့အလှုဒါနကုသိုလ် - အမေရိကန်၊ အီးယူနှင့်ဂျပန် မူပိုင်ခွင့် US Patents - ရွှေဓါတ်ငွေပိုက်လိုင်းနှင့် အနာဂါတ်မြန်မာနိုင်ငံတော် - အမေရိကန်သမ္မတလင်းကွန်းနှင့် လက်ရှိမြန်မာသမ္မတဦးသိန်းစိန် - စိန်းလန်းစိုပြေ၊ ဆေးကုပေးသော လှည်းကူး၊ တောင်ပေါ်ဆရာတော် - ရေနံချောင်းမြို့မှ TSP Technical Service Provider နှင့် လူငယ်စွမ်းရည်မြှင့်ခြင်း - စက်မှုသက်မွေးပညာနှင့်လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ခြင်း
2. Myanmar Good Attitude to Reform Country စာရေးသူ၏အမှာစာ ရန်ကုန်မြို့သို့အလည်လာခိုက် ပျက်စီးယိုယွင်းသွားသော ရန်ကုန်မြို့တော်ကို မြင်ရသော်လည်း လူငယ်မြောက်များစွာ သစ်လွင်သော စိတ်ထား၊ ခွန်အား၊ ဥာဏ်ပညာ၊ ဖြင့် စောင့်ကြိုနေသည်ကို ဝမ်းမြောက်ဖွယ်တွေ့ရပါသည်။ ထိုလူငယ်များကို Good Attitude Myanmar ဟု အမည်ပေးလိုပါသည်။ လူကြီးမြောက်မြားစွာလည်း အလားတူ တွေ့ရပါသည်။ အထူးသဖြင့် အစိုးရလူကြီးမင်းများသည် အထူးအရေးကြီးလှသည်။ သူတို့သည် နိုင်ငံတော်အာဏာ နှင့် သံယံဇာတများကို တိုင်းပြည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် အသုံးပြုနေကြသည်။ သံယံဇာတများတွင် အကောင်းဆုံးမှာ လူသားအရင်းအမြစ် Human Resource ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသား လူငယ်၊လူကြီးများအတွက် ပညာရေးတွင် လောကုတ္တရာပညာ (ဘာသာရေး) နှင့် လောကီပညာ(အတန်းပညာ) ၂ခုကို သင်ကြားပို့ချနေသူ များစွာရှိသည်။ ဦးအဂ္ဂနှင့် ILBC ဦးတင်မောင်ဝင်းကဲ့သို့ လူကြီးများစွာရှိနေသော မြန်မာပြည်အတွက် ရွင်လန်းဝမ်းမြောက်မှုရှိပါသည်။ အမြဲသတိရ၊ လုပ်ဆောင်သွားရန် - မိမိကိုယ်ကိုယ် ကောင်းအောင်ကြိုးစားမည် - မိမိပတ်ဝန်းကျင်ကို ကောင်းအောင် လမ်းပြနိုင်သော လမ်းပြကြယ် လူငယ်၊ လူကြီးများကို အထူးကျေးဖူးတင်ကြောင်း ဇော်အောင် (မုံရွာ) ၂၃-ဧပြီ-၂၀၁၄ Email: uzawaung@gmail.com Website: www.murann.com www.moemaka.com
Bollywood hotest gossip's
Justmoviez best movies reviews before you actually spend money
Creatvity and Innovation